ကြယ်… – PVTV Myanmar
Like – 19K Share – 7735
ကြယ်လေး လင်းလက်လာမဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ
Tyler River says:
ဒီကြည်လေးတွေ ကြွေလွင့်ချိန်၊ သင်တို့လိပ်ပြာ လုံရဲ့လား၊ အနာဂတ်တွေဟာ မသေခြာတော့ပါ၊ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ငါတို့ဟာ သွေးနဲ့အသားကို ပုံအပ်ထား၊ သင်တို့တွေ တကယ်လိပ်ပြာ လုံရဲ့လား။ ဒီကြည်လေးတွေ ကြွေလွင့်ချိန်၊ သင်တို့လိပ်ပြာ လုံရဲ့လား၊ အနာဂတ်တွေဟာ မသေခြာတော့ပါ၊ ဒီတိုက်ပွဲမှာ ငါတို့ဟာ သွေးနဲ့အသားကို ပုံအပ်ထား၊ သင်တို့တွေ တကယ်လိပ်ပြာ လုံရဲ့လား။
MyaMya Lay says:
2021-04-22 at 8:15 PM
2021-04-22 at 9:05 PM
2021-04-22 at 9:52 PM
စားဝတ်နေရေးကြောင့်လူတွေပြန်လည်ပတ်နေရတယ်၊ သေသွားခဲ့တဲ့သူတွေကို သနားတယ်၊ အမေစု ပြန်လွတ်စေချင်တယ်၊ နိုင်ငံတကာက အကြိမ်ကြိမ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုအတွက် ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူဖို့ ပျက်ကွက်နေခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း ၆၀ကျော်ခဲ့ပြီ၊ ကိုယ့် အရှုပ်ကိုယ် ရှင်းဖို့ NUG အားတင်းရှေ့ဆက်နေတယ်၊ ကိုယ့်အသက်ကိုယ် စတေးထားတယ်၊ လူပေါင်း၃၀၀၀ကျော် ချုပ်နှောင်ခံထားရတယ်၊ အပြင်ကလူတွေ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိပေမယ့် ဆုတောင်းနေတယ်၊ အစာမကြေဖြစ်နေတယ်၊ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတယ်၊
Ei Mon Mg Mg says:
ဦး ညႊတ္ အ ေလး ျပဳ ပါ သည္
နွေ ဦး လှိုင် says:
2021-04-23 at 8:37 AM
ဦးခင္ေမာင္ ညႊန့္ says:
လေးစားပါတယ် Gen Z တို့ရေ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
Sugoi Ame Hewia says:
ငါတို့အားလုံးရဲ့ အနာဂတ်က စျေးတအားကြီးလွန်းတယ်ဗျာ 💔
Amaya Mo says:
ဒီပုံရိပ်တွေ မြင်ရတိုင်း သင်တို့ လိပ်ပြာလုံရဲ့လား
2021-04-23 at 12:09 PM
In tears…sending love to everyone❤
Nobel Lynn says:
2021-04-23 at 3:37 PM
Sorry for nitpicking. Shouldn’t it be “UNARMED” instead of “UNHARMED”?
Han Soe Aung says:
2021-04-23 at 5:43 PM
အရေးတော်ပုံ မှာ ကျဆုံးသွားသော သူရဲကောင်းများကို အလေးနက်စွာ ဂုဏ်ပြုပါတယ် ။
Koyan Gyi says:
တခါတရံမှာ မေ့လျော့ခဲ့မိရင် တောင်းပန်ပါတယ် …ကြယ်တွေ
April Nyein says:
2021-04-23 at 8:05 PM
Daw Shwe Sin Mi says:
2021-04-23 at 9:20 PM
2021-04-24 at 11:43 AM
My tear drop when I watching this video.😭😭
Nanei Pan Pan says:
2021-04-24 at 1:43 PM
ဒီတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အယောက်ဆီတိုင်း ကျန်းမာကြပါစေ ဘေးကင်းကြပါစေ အဆင်ပြေကြပါစေ 🙏 အဆင်မပြေကြတာ လူတိုင်းမို့ ခဏ သည်းခံကြမယ်နော်
Paing Soe Khant တစ်ကယ်ကိုကြိုက်ပါတယ် လေးစားပါတယ် brother ❤️
Shwesin Moetmoet Htet says:
2021-04-25 at 2:18 PM
Democracy ရဖို့ ဒီလောက်ခက်ခဲခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မှတ်ကျောက်တင်ဖို့ အကောင်းဆုံးပဲ(ဆက်တိုက်ဖို့ အင်အားဖြစ်စေတယ်)
ဘယ်တော့မှ သွေးအေးမသွားဘူး ဘယ်တော့မှ ခွင့်မလွှတ်ဘူး အနိုင်ရတဲ့အထိ တိုက်မယ် ဒါနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲ ငါတို့အောင်ပွဲ 😭❤️✊🏻
Paulo Robert Segovia says:
2021-04-26 at 6:50 AM
My sincere condolences to the people of Myanmar. I will pray for your people safety everyday. From Philippines. Hopefully this fake government win soon collapse. And the real elected government comes back. Love you people
Nyan Tun Tun Kyi says:
2021-05-05 at 12:34 PM
Anyone have openings theme song?
Thin Thin Swe says:
2021-05-10 at 9:12 AM
တိို့အနာဂတ္အတြက္ အသက္ကိုစြန့္ျပီး လမ္းျပခ့ဲတ့ဲ ျကယ္ေလးမ်ား ဂုဏ္ယူရင္း မ်က္ရည္က်မိတယ္
2021-06-03 at 10:35 PM
2021-06-13 at 6:20 PM
Zoe Lay says:
2021-06-14 at 11:59 AM
အရမ်းသဘောကျတယ် အရမ်းကောင်းတယ် သီချင်း လေးပါ လေးစားပါတယ်
ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဒီလို စနစ်ဆိုးတွေ လူကို လူလို့မမြင်ဘဲ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်မှု့တွေမရှိသင့်တော့ဘူး ဒါဟာ ရှေ့မီ နောက်မီတွေရဲ့ဘ၀တွေ အိပ်မက်တွေ ကို ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တာပဲ ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်ကို မုဒိမ်းကျင့်တယ်လို့လည်း မြင်မိတယ်
2021-06-17 at 7:47 AM
Masaw Sawaye says:
Naw Louisa says:
2021-07-13 at 7:47 PM
အ​ကြိမ်ကြိမ်နားထောင်းအခါခါငိုခဲ့ရတဲ့သီချင်း ရေးတဲ့သူ ဆိုတဲ့သူအားလုံးတော်ကြတယ်
2021-08-09 at 8:46 AM
Speak out up#
Nang Swe Zin Myint says:
2021-08-11 at 9:54 AM
မနေ့က ကြယ်လေး5လုံး ထပ်ကြွေသွားတယ်
2021-08-11 at 11:59 AM
ကြယ် ငါး လုံးလေး နောက်ဖေးလမ်းကြားမှာကြွေပြန်ပီ 😭💔
Hset Moe says:
2021-08-22 at 9:07 AM
This song makes me cry whenever I listen to this song.Rest in power our heroes. We must win for sure✊✊
2021-08-25 at 11:06 PM
အခုတော့မငိုသေးဘူးအားတင်းထားတယ် ‌ရောင်နီလာမှ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းတွေ အတွက်ကော ကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ကော ပေါင်းငိုမယ် အခုတောအားတင်းထားတယ်💪💪💪